Maitiro ekudzoreredza kana kuseta iyo AirPods Pro | IPhone nhau
Maitiro ekudzoreredza kana kuseta patsva AirPods Pro
Imwe yesarudzo dzatinadzo mune zvese zvigadzirwa kana paine matambudziko erudzi chero rupi zvaro kana isu tichida kuvapa kana kuzvitengesa, ndiyo sarudzo yekudzorera mudziyo kubva pakutanga. Mune ino kesi tichaona kuti tingaite sei dzosera iyo itsva AirPods Pro, iyi sarudzo yatinofanira isu tese kuziva uye zvinonakidza kuziva matanho.
Kuti udzorere kana kuseta patsva AirPods Pro, matanho akawandisa haana kudikanwa se isu hatisi kutarisana nechinhu chakaomarara futi kuita, chero munhu anogona kuzviita. Saka ngatione kuti kudzoreredza kunoitwa sei mahedhifoni ari kubudirira chaiko pakati pevashandisi veApple.
Chokwadi ndechekuti hatizodi kuita chiito ichi kakawanda asi kana tichichida tinofanira kuziva maitiro ekuzviita. Saka ngatisiyei zvese uye titarise pane iyi sarudzo. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kusunungura maAirPod, nhanho isati yadzorerwa:
Isu tinovhura Zvirongwa pane iyo iPhone uye toenda kuBluetooth
Isu tinotsvaga maAirPod edu uye tinya pane ruzivo rwuri rwepamusoro "ini"
Zvino tinya Skip mudziyo uye simbisa
Isu tatova neAirPods isina kubatana uye ikozvino tinogona kuenderera nekumisikidza izere navo. Ichi chiito chekare chingareva kuti kukundikana (kana paine dambudziko) kunogadziriswa, asi isu tinogara tine chiito chinotevera, chinova chekumisazve AirPods Pro.
Vhara iyo muvharo uye mirira 30 masekondi, wobva wavhurazve muvharo weAirPods
Ikozvino nevhavha yakavhurika, tinya bhatani rekumisikidza kuseri kwenyaya kweanenge maminetsi gumi neshanu, kusvikira mwenje wechiedza wabhenekera amber
Isu tinopfiga chivharo chebhokisi. Isu tapedza maitiro AirPods Pro kudzoreredzwa
Iye zvino kana tichida kuatora zvakare isu tinongosiya chivharo chakavhurika uye toisa iyo AirPods kumashure padyo neiyo iPhone. Tichazobvunzwa kuti tivagadzirise zvakare, isu tinongotevera matanho uye ndizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzoreredza kana kuseta patsva AirPods Pro
Apple inozivisa chiitiko chinoshamisika muna Zvita 2
IOS uye iPadOS 13.2.3 yakaburitswa zviri pamutemo!